I-Grand Theft Auto 4 Ukukopela Amakhodi we-Xbox 360
Amakhodi amakhulu wokukhohlisa i-Theft Auto IV: Xbox 360
I-Auto Theft Auto 4 Amakhophi, Amakhodi, Amacebo, Amathiphu namaphasiwedi
I-Grand Theft Auto IV iyinhlangano yemidlalo ye-action-adventure eyingxenye yochungechunge lwe- Grand Theft Auto ngu-Rockstar North. Ngezansi kukhona amakhodi akhohlisayo we-Xbox 360 version yomdlalo.
Amaphasiwedi efoni yeselula
Noma kunini phakathi nomdlalo, phuma ucingo lukaNiko bese ushaya lezi zinombolo ngomphumela oyifunayo. Qaphela ukuthi ukukopela kuzothinta ukuthunyelwa kwakho nempumelelo yakho, ngakho-ke noma uqedele ukufeza kwakho kuqala noma sebenzisa iphrofayli ehlukile ukukopela. Lawa amakhodi wokukopela ngemisebenzi ehlukahlukene:
Shintsha Isimo Sezulu
Ikhodi yokukhohlisa: 468-555-0100
Thola ukukhetha okuhlukile kwezikhali
Ikhodi yokukhohlisa: 486-555-0150
Thola Ukukhethwa kwezikhali
Ikhodi Yokukhohlisa: 486-555-0100
Khuphula izinga lokufunwa
Ikhodi yokukhohlisa: 267-555-0150
Susa izinga lokufunwa
Ikhodi yokukhohlisa: 267-555-0100
Ikhodi yokukhohlisa: 362-555-0100
Buyisela Impilo, Izikhali, ne-Ammo
Ikhodi yokukhohlisa: 482-555-0100
Ikhodi Yokukopela: 948-555-0100
Ikhodi yokukhohlisa: 227-555-0142
Ikhodi yokukhohlisa: 227-555-0175
Ikhodi yokukhohlisa: 938-555-0100
Ikhodi yokukhohlisa: 625-555-0150
Ikhodi yokukhohlisa: 227-555-0168
Ikhodi yokukhohlisa: 227-555-0147
Ikhodi yokukhohlisa: 359-555-0100
I-Spawn i-FIB Buffalo
Ikhodi yokukhohlisa: 227-555-0100
Ikhodi yokukhohlisa: 625-555-0100
Izinto ezilandelayo zingavulwa ku- Grand Theft Auto IV ku-Xbox 360 video game console.
50 P kuzo zonke izitolo zokugqoka
Thola amaphesenti angu-80 Isimo Sobudlelwano no-Alex
Shayela iPackie ukucela ukuthi akwenze ibhomu lemoto.Hlanganisa ubungane obunamaphesenti angu-75 ne-Packie.
Uzokukhetha e-helicopter yakhe. Thola ubuhlobo obunamaphesenti angu-70 noBrucie
Thenga izikhali ngentengo eshibhile evela kuLil Jacob. Thola ubungani obungamaphesenti angu-60 noJakobe Omncane
Imoto yamalungu esigqebhezana izothunyelwa ukukusiza. Thola ubuhlobo obunamaphesenti angu-60 noDwayne
Shayela itekisi. Thola ubuhlobo obunamaphesenti angu-60 namaRoma
Shayela i-Carmen bese ukhetha "Ukuthuthukiswa Kwezempilo." Thola amaphesenti angu-80 Isimo Sobudlelwano noCarmen
Susa Kuze Ku-3 Kufunwa Izinkanyezi
Shayela u-Kiki bese ukhetha "Susa u-Wanted." Thola isimo sobuhlobo besilinganiso sama-80 nge-Kiki
Thola i-ATM, bangela ukuqhuma komgwaqo futhi uvimbele imigwaqo ukuze i-ambulensi ingakwazi ukuphumelela. Vumela umuntu noma ababili bathole imali ku-ATM bese ubabulala. Thatha imali, uhambe, ubuyele futhi imali izoba khona. Ungaphinda lesi senzo.
Thola Isitembu se-T-shirt yokukhulula
Ngesikhathi uhamba, vakashela iSitatimende Sokukhululeka futhi ukhuphukele esitezi sesibili. Uzobona umnyango. Hamba ngalo, futhi umdlalo uzolayisha. Uma ubuyela emnyango, uzoba neshembe elisha.
Shayela u-911 uma imoto yakho ingasebenzi, futhi imoto yakho izoqala.
Qaphela ukuthi le-URL isebenza kuphela kumdlalo, hhayi kwi-Inthanethi: www.whattheydonotwantyoutoknow.com. Sebenzisa i-URL ngezikhali, ezempilo, izikhali, imoto, amajuba, izindawo zokuhamba / izindawo zokuzijabulisa
Inhliziyo ye-Liberty City
Uma ufinyelela ku-Happiness Island, thola izindiza ze-helicopter bese uthatha i-helicopter. Fly the helicopter kuya eSitatimendeni Sokukhululeka futhi uphume emanzini esithombe. Uma uhamba, uzoba ngezinyawo zesithombe esiteji. Hamba nxazonke yesikhulumi kuze kube khona umnyango ovela ngezibonakaliso zombili zombili, ufunda: "Akukho Okuqukethwe Okufihliwe Lapha." Hamba ngomnyango, futhi uzothola isitezi esinde; ukukhuphuka. Phezulu, uzobona inhliziyo ibetha phakathi kwamaketanga.
Shayela imoto engxenyeni enkulu yemoto. Vula uphondo kanye ukuze wenze "Shave kanye nezinwele." Enye imoto kufanele yenze "ama-bits amabili." Qaphela: Omunye umshayeli emdlalweni angenza lokhu.
I-GTA 4 Impumelelo
Imphumelelo elandelayo ingavulwa ku-Grand Theft Auto IV ku-Xbox 360 video game console. Ukuze uvule impumelelo namaphuzu we- gamerscore , yenza umsebenzi obonisiwe .
I-helicopter ibulala amagundane angu-200 ahamba ngezinyawo.
Umbala we-Rastah Huntley SUV
Gcwalisa imihlangano eyishumi yokuhambisa iphakheji.
Susa i-Ammo Limit
Thola ukuphelelwa kwamaphesenti angu-100.
Ukuhaha kuka-Assassin: Lokhu kufanele amaphuzu angu-20.
Gcwalisa zonke izinkonzo eziyisishiyagalolunye zokubulala.
auf Wiedersehen Petrovic . Lokhu kufanele amaphuzu angu-30.
Yinqoba konke ukuhlukahluka kwabadlali abaningi, zonke izinhlanga nama-Cops 'n' Crooks, njengezinhlangothi zombili.
Ukulandelana kwe-Chain : Lokhu kufanele amaphuzu angu-20.
Vula izimoto ezingu-10 ngemizuzwana engu-10.
Kuhlanjululwe imigwaqo ephakathi : Lokhu kuwufanele amaphuzu angu-20.
Thatha abagebengu abangu-20 ngokusebenzisa ikhompyutha yamaphoyisa.
Isevisi ye-Courier : Lokhu kufanele amaphuzu angu-10.
Qedela yonke imisebenzi yephakheji engu-10.
Sika Izinyosi Zakho : Lokhu kuzuze amaphuzu amahlanu.
Thola ukuphakanyiswa kwesigaba somuntu kumdlali abaningi.
Dare uDare : Lokhu kufanele amaphuzu angu-30.
Gcwalisa amaphesenti angu-100 e-jumping stunt.
Ukudayela B for Bomb : Lokhu kuwufanele amaphuzu ayishumi.
Vula ikhono elikhethekile lokufonela ibhomu elizofakwa.
Ukushayela uMnu. Bellic : Lokhu kufaka amaphuzu ayishumi.
Vula ikhono elikhethekile lamatekisi.
Izidakamizwa ezisengozini : Lokhu kuwufanele amaphuzu angu-50.
Qoqa yonke iphakheji efihliwe.
Ukudla i-Fish: Lokhu kuwufanele amaphuzu amahlanu.
Gcwalisa iMission "Uncle Vlad": Lokhu kufanele amaphuzu amahlanu.
Mqedile : Lokhu kufanele amaphuzu angu-15.
Gcwalisa izibalo ezingu-10 ze-melee emaminithini amane.
Fly the Co-op : Lokhu kuwufanele amaphuzu angu-5.
Isikhathi se-Beat Rockstar ngezilinganiso ezibalwe ze-Deal Breaker, i-Hangman's NOOSE ne-Bomb da Base II.
Vula zonke iziqhingi.
I-Genetically Superior: Lokhu kufaka amaphuzu angu-25.
Woza kuqala ezinkundleni ezingu-20 ze-singleplayer emigwaqweni
I-Gobble Gobble: Lokhu kufanele amaphuzu angu-10.
Yenza imikhakha emithathu ngokulandelana - i-turkey - ku-10-pin bowling.
Kuthathwa ngomusa: Lokhu kufanele amaphuzu angu-10.
Gcwalisa umsebenzi, "Ngizomthatha."
Half Million: Lokhu kufanele amaphuzu angu-55.
Finyelela ibhalansi ye $ 500,000.
I-Impossible Trinity: Lokhu kufanele amaphuzu ayishumi.
Imisebenzi ephelele "I-Museum Piece."
Kuzobiza i-Ya: Lokhu kufanele amaphuzu ama-5.
Gcwalisa uhambo lwamatekisi ngaphandle kokudlula kusuka kwesinye isiqhingi ukuya kwesinye.
Joyina Club Midnight: Lokhu kufanele amaphuzu ayishumi.
Gcina umjaho wabadlali abaningi obala ngaphandle kokulimaza imoto yakho kakhulu futhi umonakalo unike amandla.
Isihluthulelo soMuzi . Lokhu kufaka amaphuzu angu-100.
Finyelela amaphesenti angu-100 kusibalo "seNtuthuko yemidlalo".
I-King of QUB3D : Lokhu kufanele amaphuzu angu-15.
Vumela Ukulala I-Rockstars Amanga : Lokhu kufanele amaphuzu ayishumi.
Bulala umthuthukisi we-Rockstar kumdlalo wabadlali abaningi ababalwe.
Liberty City (5) : Lokhu kufanele amaphuzu angu-20.
Ngemuva kokuhlangana nabo bonke abangani, labo abashiywe baphila njengowe ngaphezu kwamaphesenti angu-90.
I-Liberty City Minute: Lokhu kufanele amaphuzu angu-30.
Gcwalisa imihlangano yezindaba emahoreni angaphansi kwama-30.
Iphoyinti eliphansi kakhulu: Lokhu kufanele amaphuzu angu-5.
Imisebenzi ephelele "Umdabu waseRoma"
I-Manhunt : Lokhu kufanele amaphuzu angu-15.
Qedela ukuhambelana kwezinto ezifunwa kakhulu kusuka kukhompyutha yamaphoyisa.
Abangenabanye Abahlali : Lokhu kufanele amaphuzu angu-5.
Hlanganisa zonke izinhlamvu ezingahleliwe.
Ukuphuma esikebheni : Lokhu kufanele amaphuzu angu-5.
Qedela umsebenzi wokuqala
Omunye Namakhulu Eyisishiyagalombili Emdlalweni WemiDlingozi : Lokhu kuwufanele amaphuzu ayishumi.
Amaphuzu angu-180 anezintambo ezintathu kuphela.
I-One Man Army : Lokhu kuwuphawu lwamaphuzu angu-40.
Sinda imizuzu emihlanu ngezinga elifunwa izinkanyezi eziyisithupha.
I-oda Eligcwalisekile : Lokhu kufanele amaphuzu angu-10.
Qedela wonke ama-oda angaphandle okuthumela ngaphandle kwe-Exotic
I-Shark Pool: Lokhu kuyafaneleka amaphuzu ayishumi.
Beat umngane echibini
I-Therapy Yokuthengisa: Lokhu kufanele amaphuzu angu-10.
Vula ikhono lokuthenga izibhamu kumngani.
Iqoqowe: Lokhu kuzuze amaphuzu angu-30.
Yenza imiqulu emihlanu yemoto ngokulandelana kusuka kokuphazamiseka okukodwa.
I-Sightseer: Lokhu kuwufanele amaphuzu angu-5.
Hamba kuzo zonke izindiza ze-helicopter ze-Liberty City
Ukuwuthatha Ithimba: Lokhu kufanele amaphuzu ayishumi.
Yiba eqenjini eliwina kuwo wonke amageyimu wabadlali abaningi ababala .
I-Teamplayer: Lokhu kufanele amaphuzu angu-10.
Bulala abadlali abahlanu abangekho eqenjini lakho kunoma yimuphi umdlalo wethimba labadlali abaningi abadlali abalinganiselwe.
LoMuntu Okhethekile: Lokhu kufanele amaphuzu ayishumi.
Qedela umsebenzi, "Lowo Okhethekile."
Yilokho Sasihamba Ngayo! Lokhu kufanele amaphuzu angu-10.
Vula ikhono elikhethekile le-helicopter.
Phezulu Kokudla Kokudla: Lokhu kuwufanele amaphuzu ayishumi.
Bulala abadlali abangu-20 ngesibhamu endaweni yokubulala abadlali abaningi.
I-Top Mid Club Club: Lokhu kufaka amaphuzu angu-20.
Woza kuqala ngezinhlanga ezingu-20 ezibekwe eceleni ezijwayelekile zabadlali abaningi.
Ngaphansi kwe-Radar: Lokhu kufaka amaphuzu angu-40.
Fly ngaphansi kwamabhuloho amakhulu emdlalweni owela amanzi nge-helicopter.
Hamba mahhala: Lokhu kufanele amaphuzu angu-50.
Lahla izinga elifunwa izinkanyezi ezine ngokukhipha amaphoyisa.
Kufunwa: Lokhu kufanele amaphuzu angu-20.
Finyelela isikhundla esiphezulu kunabo bonke kubadlali abaningi.
Coffee efudumele: Lokhu kufanele amaphuzu amahlanu.
Ngempumelelo ngifaka intombazane ukuba imenywe endlini yakhe.
Wheelie Rider: Lokhu kufanele amaphuzu angu-30.
Yenza i-wheelie ehlala okungenani ngamamitha angu-500 ngesithuthuthu
Uthole Umlayezo: Lokhu kufanele amaphuzu angu-20.
Khipha zonke izimoto ezingu-30 ezilethwe ngemilayezo yombhalo
Unqobile! Lokhu kufanele amaphuzu angu-60.
Gcwalisa umsebenzi wokugcina.
I-Top 10 Enhle Ebheka Xbox 360 Imidlalo
Iyini i-Xbox One: Konke Okudingeka Ukwazi
I-Lego Star Wars 3: I-Clone Wars Cheats - I-Xbox 360
I-Left 4 Dead 2 Cheats - I-Xbox 360
I-Grand Theft Auto San Andreas I-Xbox Cheats namakhodi
Ngingabuka ama-DVD ku-Xbox 360?
I-Guitar Hero: I-Metallica Full Song Song
I-Xbox Imidlalo ene-Emulators ye-Xbox 360
Ukubukeka kwe-Nyko kwe-Kinect Review (X360 Kinect)
I-Best Best Controller yabazali bama-Routers Yokuthenga ngo-2018
Izitifiketi zesitifiketi zendabuko
I-I-imeyili Okunamathiselwe I-Iconizer - I-Mac OS X I-Mail Yengeziwe
Indlela yokufaka i-Android Debug Bridge (ADB)
Ukubuyekezwa kweThuluzi le-KillDisk v11 Software
Kuyini ukuvuselelwa komkhiqizo?
Iyini iViewemail yeVisual?
Indima ye-Wi-Fi ye-802.11b ku-Inthanethi Yokuxhumana
Indlela Yokulanda Kuphela Ama-Header for Imilayezo Emikhulu ku-Outlook
Amasayithi wokuhlola we-Speed ​​Speed
Indlela yokusebenzisa i-Meta Refresh Tag
Indlela Yokukwazi Inombolo Yefoni Yakho Kuyini
Indlela yokusesha nge-Amazon ngokuphumelelayo
Amasayithi Okugcina Omculo Wokugcina Othuthela
Ukusakaza kwevidiyo - Indlela Yokugwema Izinkinga Zokuxhuma
Izinto Ongayenza Nge-Wolfram Alpha
Konke Mayelana Nokufika Ku-GIF Izithombe